Ifakwe kwibhloko esuka kwi-Continental Square, esi sakhiwo sembali sihle kwaye sikhululekile. Ifanelekile impelaveki ephakathi kwedolophu, iyunithi ibonelela ngembono yesixeko ukusuka kwigumbi lekona elinokukhanya okuninzi kwendalo. Eli gumbi le studio lixhotyiswe ngekhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlambela, iwasha kunye nesomisi. Kubonelelwe ngeempahla zasekhitshini, iilinen, imiqamelo kunye neetawuli zokuhlambela.
Eyaziwa ngokuba siSakhiwo saseHaines, esi sakhiwo siyimbali sisanda kulungiswa ngokutsha ngeetops zegranite counter kunye nezixhobo zentsimbi. Le yunithi yekona ikumgama ogqibeleleyo wokuhamba kuzo zombini i-Continental Square kunye neRoyal Square kumbindi wedolophu.
4.81 · Izimvo eziyi-113
IDowntown iye yafumana ukuvuselelwa okukhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo. Le ndlu ikwindawo egqibeleleyo yokuthatha uhambo olujikelezayo ukuya kwenye yeendawo zokutyela ezininzi, iibreweri, iigalari zobugcisa kunye nemisitho.
Ibhokisi yokutshixa iyafumaneka kwisiza ukulungiselela iiyure zonke zokungena. Ukuba kukho nayiphi na imiba, ndihamba nje ezimbalwa phakathi evekini kwaye ndingafikelelwa ngo-Airbnb ngaphandle kokuba kuphawulwe ngenye indlela.